Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android Phone si iPhone (iPhone 6 mid)
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay iPhone (6s iPhone Plus mid)
Ma doonaysaa in ay beddelaan ka Android inay iPhone? Taasi waa wax fiican. Si kastaba ha ahaatee, waxaan u maleynayaa in aad walwasho laga yaabaa in badan oo ah sidii aad xogta ka soo Android wareejiyo iPhone. Dhab ahaantii, uma baahnid inaad wax laga walwalo bedesheen ka Android inay iPhone oo dhan. Waxaa jira qaar ka mid ah siyaabaha lagu heli karaa si aad u raalli ka phone Android lagu wareejiyo si aad iPhone, taas oo ka dhigaysa, waayo, waxaad u haajiraan oo dhan xog muhiim ah si nabad ah. Fiiri siyaabaha ay heli karaan xogta laga Android wareejiyo iPhone hoose oo ka mid ah in ay kugu habboon dooran.
Fiiro gaar ah: jidadkiisa oo dhammu waa u soo sheegnay hoose sida laga soo Android wareejiyo iPhone waxay diyaar u yihiin ku dhowaad wax telefoonada Android dambeeyay socda Android hurdiga ah iyo Marshmallow iyo iPhone socda ee macruufka 9, oo ay ku jiraan 6s iPhone iyo iPhone 6s Plus. Haddii aad qabto iPhone cusub, si xor ah u isticmaalaan siyaabo in ay xogta ka phone Android wareejiyo 6s iPhone aad (Plus).
1. toobiye: ka Android wareejinta xogta si iPhone 1 Click (120 daqiiqo, <10 daqiiqo)
2. Free Siyaabaha Bedelka Android Data si iPhone (120 daqiiqo)
2.1 Transfer Xiriirada ka Android inay iPhone (10 daqiiqo)
2.2 nidaameed Notes, Email iyo Kalandarada ka Android inay iPhone (10 daqiiqo)
Music 2.3 Transfer iyo Video laga soo Android inay iPhone (10 daqiiqo)
2.4 Hel Android Apps on iPhone (60 daqiiqo)
2.5 Bedelka Photos ka Android Phone si iPhone (10 daqiiqo)
2.6 Waraaqaha nidaameed si iPhone ka Android Phone (20 daqiiqo)
1. toobiye: ka Android Bedelka Content si iPhone 1 Click ( <10 daqiiqo )
Aad bay u daaya ka xawaaraha gaabis ah si ay u gudbiyaan xogta Android inay iPhone 6s (Plus) yar yar? Haddii aadan haysan in. Halkan waa Android awood leh si iPhone qalab kala iibsiga - Wondershare MobileTrans , kaas oo kaa caawinaysaa in aad ka Android inay iPhone 6s (Plus) wareejiyo xiriirada, sawiro, video, sawiro iyo music 1 click. Intaa waxaa dheer, waa software ugu horeysay ee adduunka si ay u taageeraan fariimaha ka Android inay iPhone 6s (Plus) wareejinta.
Mase Android inay iPhone 6s (Plus) ma noqon karo fududaynta
Si fudud ka Android inay iPhone 6s (Plus) wareejiyo xiriir la info buuxa.
Jadwalka Nuqul ka Android inay iPhone, iyadoo aan loo eegayn waxa ay ku xasuusta telefoonka ama daruur.
Bedelka oo dhan video iyo music, oo aanay kuwa aynan ka Android inay iPhone 6s (Plus).
Bedelka fariimaha qoraalka ah ka Android inay iPhone 6s (Plus) si fudud qoraal dadka kale.
Nuqul albums iyo sawiro ka Android inay iPhone 6s maktabadda (Plus) sawir leh, si aad ku eegaan karo wakhti kasta.
In loo sahlo in ay beddelaan ka HTC, Samsung, Motorola oo dheeraad ah si ay u iPhone 6s (Plus) / 6 Plus / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS in ay maamulaan macruufka 9/8/7/6/5.
3 Talaabada si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay iPhone 6s (Plus) 1 Click
1.Contacts in account: Wondershare MobileTrans wareejin karaan xiriirada on Twitter, Facebook, Google iyo xisaab oo ay taageerayaan qalab Android aad. Sidaa darteed, fadlan hubi in aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xiriirada in xisaabaadka ama aan. Haddii ay haa tahay, fadlan saxiix ee xisaabaha qalabka Android aad. 2. Hal-guji kaabta iyo Soo Celinta: Isticmaal hab marka aad hal telefoonka gacanta. Just xog gurmad telefoonka aad Android inay computer, iyo celin doonaa iPhone 6s (Plus) mar kasta oo aad u baahan tahay.
Tallaabada 1. Orod Android ay u iPhone Data Transfer Tool
Orod wareejinta xogta qalabka Android inay iPhone kombiyuutarka, iyo waxaad arki doontaa suuqa kala ah sida soo socota. Ka dib markaas, xirmaan telefoonka aad Android oo aad iPhone la kombiyuutarka via fiilooyinka USB siday u kala horreeyaan. Hubi in labada qalabka lagu guul leh ogaan karaa your computer.
Tallaabada 2. Dooro Phone in feature Transfer Phone
In uu furmo suuqa ugu weyn, dooro Phone in Transfer Phone hab, oo waxaad arki doontaa qaab barnaamijka sida soo socota. Waxaad isticmaali kartaa "Flip" button ay u wareegaan meelaha telefoonada iyo in la hubiyo in iPhone waa meel ka mid ah.
Tallaabada 3. SMS Transfer, Xiriirada, Calendar, Photos, Video iyo Android Music inay iPhone 6s (Plus)
Ka dib markaas, waxaad arki kartaa in dhammaan waxyaabaha ku jira kara in la qaadsiiyo ku qoran yihiin dhexe ee suuqa kala. Hubi files doonayay oo guji Start Copy . Wada hadal yar booda, kuu sheegaysa boqolkiiba bar horumarka. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, marnaba barkinta qalab midkood.
2. Free Siyaabaha kala iibsiga xogta ka Android inay iPhone
Si aad u gudbiyaan xiriirada Android inay iPhone 6s (Plus), waxaad badbaadin kartaa dhammaan xiriirada kaarka SD Android, iyo geliyaan si ay u xisaab-aad, sida Google, Yahoo !, iCloud, ka dibna u hagaagsan in aad iPhone 6s (Plus). In ay qayb ka socda, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo sameeyo via account Google.
Talaabada 1: On telefoonka aad Android, u tag Xiriirada app. Tubada badhanka bidixda ee button guriga si ay u muujiyaan liiska menu. Tubada Import / dhoofinta .
Tallaabada 2. Click dhoofinta in Kaydinta USB > OK si loo badbaadiyo liiska xiriirada in kaarka SD aad. Connect telefoonka aad Android la your computer via cable USB ah sida disk ah. Fur faylka card SD inay u dhoofiyaan file vCard ah in aad damisid.
Tallaabada 3. Fur aad webpage Gmail on your computer. Riix Gmail > guji Xiriirada si ay u muujiyaan guddi gacanta xiriir ah. Riix More > Import ... . > Guji Dooro File in ay doortaan file vCard baad u badbaadisay in tallaabooyinka 2 si ay u dajiyaan ah.
Tallaabada 4. aad iPhone, guji Settings > Mail, Xiriirada, Kalandarada > dar xisaabta ... > Google . Log in la xisaabtaada Gmial oo ka jaftaa Next dhammayn Mudanayaasha. Daar Xiriirada. Markaas, xiriirada la synced doonaa iPhone).
Phone Your Android qoreysa u hagaagsan Google iyo riyaaqaa syncing oo dhan jadwalka muhiim ah in account Google. Great. Waxaad u hagaagsan kartaa jadwalka taariikhda ka Google inay iPhone 6s (Plus) si fudud.
Tallaabada 1. telefoonka aad Android, guji Settings . Hoos shaashadda si aad u hesho xisaabta & hagaagsan. Raadi aad xisaabta Gmail oo ka jaftaa nidaameed Kalandarada . Markaas, ka jaftaa nidaameed Hadda si aad u cusboonaysiiso jadwalka taariikhda ah in aad xisaabta Gmail. Xiriirada sidoo kale la synced karaa waqti isku mid ah.
Tallaabada 2. Adiga iPhone 6s (Plus), tuubada Settings oo taga si Mail, Xiriirada, Kalandarada oo guji dar xisaabta ... . Dooro Gmail iyo geli info xisaabta Gmail, sida magaca, cinwaanka email, password. Tubada Next iyo shid Kalandarada, Email iyo Fiiro gaar ah. Markaas, habka syncing bilaabmin.
Ma sugi karo inaan soo music video iyo telefoonka aad Android inay iPhone? Dhib ma leh. Lugood samayn kartaa in aad u fudud.
Tallaabada 1. Isku telefoonka aad Android inay computer iyo badbaadin music iyo videos si aad u computer ah. Ku rakib Lugood kombiyuutarka. Waxay u ordaan oo aad aad iPhone xiran cable USB ah.
Tallaabada 2. In Window Lugood, riix File > dar Folder inay Library ... . Browse your computer si aad u hesho folder music iyo video iyo wareejiyo video music iyo in Lugood Library.
Tallaabada 3. Guji aad iPhone hoos AALADAHA si aad u hesho guddi gacanta iPhone. Riix Music tab> nidaameed Music . Sax aad doonayso music ama playlists oo guji codso .
Tallaabada 4. In video ka Android wareejiyo iPhone, waxaad riixi kartaa Movies , TV muujinaysaa ama dadka kale qaybaha video. Markaas, Sax aad doonayso videos guji codso .
Maxaa la ordi Android Apps on iPhone? Si aad qoomamo, barnaamijyadooda Android ma shaqeeyaan iPhone (macruufka 9 taageeray) ah. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijyadooda badan Android leeyihiin versions iPhone ama bedelo in samaysaa isla wixii. Waxaad ka raadin kartaa iyo barnaamijyadooda sida ka App Store hesho in Lugood si fudud.
Intaa waxaa dheer, haddii aad u baahan tahay qaar ka mid ah barnaamijyadooda si ay u abuuraan xisaab u ciyaaro ama dukaamada xogta aad daruurta, xogta la iman doonaa marka aad u dhaqaaqo iPhone. Ama, xogta la ka dib markii laga badiyay doonaa iyaga rakibi aad iPhone 6s (Plus). Sidaas darteed, ka dib markii bedesheen ka Android inay iPhone, waxaad ka heli kartaa waxa aad rabto in aad ka App Store ama baadhaan internetka u helayso barnaamijyadooda ugu wanaagsan lacag la'aan ah iPhone 6 (Plus) .
Weli in yar oo wareersan? Baro wax badan oo sida aad u heli lahaayeen barnaamijyadooda ku iPhone 6 (Plus) halkan >>
2.5 Transfer Photos ka Android inay iPhone (10 daqiiqo, Free Jidka)
Waxaad laga yaabaa in aadan rabin in aad lumiso oo boqollaal kun oo sawiro oo aad ugu qortid xasuus qiimayn karaa. Halkan waa qaab ka soo baxay. Si aad u gudbiyaan sawiro Android inay iPhone, waxaad sawiri kartaa taageero ka Lugood.
Bilowga aad, dalka buuraha leh telefoonka aad Android kombiyuutarka sida drive USB ah. Jiid jeedi oo dhan photos xiisootay gal on your computer. Connect aad iPhone in computer deeruhu in cable USB ah. By gujinaya aad iPhone, waxaad ka heli guddi ay gacanta. Tag Photos iyo sax Photos nidaameed ka heli iyo folder sawirka. Tag geeska hoose ee midigta iyo guji codso in ay u hagaagsan sawiro ka Android inay iPhone.
2.6 nidaameed waraaqaha si iPhone ka Android (20 daqiiqo, Free Jidka)
Ma doonaysaa inaad dokumentiyo aad, sida Excel, PPT, PDF, TXT, DOC oo dheeraad ah si loo 6s iPhone aad (Plus) u arkaysid ee u tegayaa? Si aad u samee, WordPress waa mid caawisa oo adiga kuu wanaagsan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad geliyaan waraaqaha aad doonayay inuu si hadhaysaa aan ka kaaftoomi kasta. Markaas, abuurtaan DropBox ku saabsan iPhone 6s (Plus) si aad u eegto ama wax ka bedel wax waraaqo aad rabto. dheeraad ah oo ku saabsan DropBox Baro .
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay iPhone 6 / iPhone 6 Plus